Soomaalida UK oo London kula kulmay Safiirka Koonfur Afrika ee dalkaas – Radio Daljir
Maajo 6, 2015 10:00 b 0
Arbaco, May 06, 2015 (Daljir) — Kaddib mudaahraad ka dhan ah dhibaatada Soomaalida loogu geysnayo dalka Koonfur Afrika oo Sabtidii toddobaadkan ka dhacay magaaladda London ee dalka Britain, ayna ka qaybgaleen Qurba-joogta Soomaaliyeed ee ku nool UK oo magaalooyin kala duwan isaga yimid; ayaa waxaan shalay kulan yeeshay safiirka dalka Koonfur Afrika u fadhiya Britain, Obed Mlaba Qurbo-joogta Soomaaliyeed ee Ingiriiska.
Qurba-joogta Soomaaliyeed ayaa u gudbiyay danjiraha cabashadooda ku aaddan walaaca ay ka qabaan dilalka, boobka iyo isir-nacaybka joogtada noqday ee lagu hayo Soomaalida ganacsiyada ku leh dalka Koonfur Afrika.
Bulshada Qurbo-joogta ah ee la kulantay danjiraha Koonfur Afrika ayaa si cad ugu sheegay in falalka ay geysanayaan muwadiniinta dalkiisa ay yihiin dambiyo ka dhan ah xaquuqul insaanka, isla markaasna ay ka tahay mid ka daran cadaalalad-daradii lagu hayay shacabka Koonfur Afrika xilligii midab-kala-sooca uu dalkaas ka jiray.
Sidoo kale, Qurbo-joogta ayaa ayaa u sheegay safiirka in xilligaa ay shacabka Soomaaliyeed ka mid ahayeen kuwii garab-istaagay qadiyadda ay reer Koonfur Afrika ugu dagaalamayeen xorriyaddooda; iyadoo safiirku uu ka garaabay arrintaas.
Danjiraha ayaa caddeeyay inuu dowladdiisa u gudbin doono cabashada ka timid Qurba-joogta Soomaaliyeed si wax looga qabto dhibaatada dadka Soomaaliyeed ee ku gacansada dalkiisa lagu hayo.
Shil Sababay Khasaaro Dhimasho oo ka dhacay Duleedka Garowe